[Friday, April 14th, 17] :: Ciidamo Mareykan ah oo Muqdisho soo gaaray
Nairobi (RH) Idaacadda VOA ayaa ogaatay in magaalada Muqdisho ay gaareyn ciidamo Mareykanka ah kuwaasoo ku yimid dalab ka soo yeeray dowladda fedaraalka Soomaaliya.
Ciidamadan ayaa la sheegay in ay ka qeyb qaadan doonaan tababarka iyo qalabeynta ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM si loo xoojiyoo dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab.
Waa markii ugu horreysay oo ciidamo Mareykanka ka socda ay soo caga dhigtaan Soomaaliya tan iyo bishii Maarso sannadkii 1994-tii xilligaas oo howgalkii rajo soo celinta ee QM la dilay 18 askari oo Mareykan ah kaddib dagaallo dhex marey ciidamada Mareykanka iyo kooxo hubeysan oo uu madax u ahaa Allaha u naxariisto Jeneraal Maxamed Faarax Ceydiid.
Ciidamadan Mareykanka ayaa la sheegay in ay codsatey dowlada fedaraalka iyagoo gacan ka siinaya xoojinta ammaanka iyo la dagaallanka Al-Shabaab.
Ciidamadan ayaa la sheegay in labadii bishan April ay soo gaareyn Muqdisho. waxaana ay ka kooban yihiin 3 illaa 50 cutub oo ka tirsan cutubka 101st Airborne Division.
Ciidamadan cusub qeyb kama ahan howgalka Mareykanka uu hadda ka wado Soomaaliya, sidaas waxaa laga soo xigtay sarkaal Mareykanka.
Toddobaadkii horre, Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay Al-Shabaab in muddo 60 cisho ay isku soo dhiibaan si ay ugu soo laabtaan waxbarashadooda iyo shaqooyinkii ay ku jireyn.
Maalin kaddib, waxaa Muqdisho ka dhacay qarax loo adeegsaday baabuur oo lagu weerari rabay baabuur ay la socdaan saraakiisha ciidamada balse waxa uu ku qarxay bas la socdeyn dad shacab ah oo halkaas ku dhintay waxaana sheegtay Al-Shabaab mas’uuliyadda.
Mareykanka horre waxaa uga joogay Soomaaliya ciidan kooban oo tababarayaal ah.
posted on Friday, April 14th, 17